I-FB yecandelo lesithathu lokuqhushumba ubungqina bokucoca isicoci somzi mveliso onzima womenzi kunye nomzi mveliso UMarcospa
Uthotho lwe-FB uthotho lwesithathu sokuqhushumba ubungqina bokucoca ishishini
Inqaku kukhuseleko ngakumbi kunye nokuqhushumba-ubungqina, ukukhanya kunye nokufikeleleka ngakumbi kunabanye abacoci becoci abanamandla. Kukulungele ukusebenza ngokuqhubekayo kweendawo ezinokuqhushumba kunye nothuli olunokutsha kunye neziqhushumbisi okanye izixhobo zeshishini. Ukusetyenziswa ngokubanzi ekusebenziseni isinyithi, ukulungiswa kwephepha leplastiki, ibhetri, ukulahla, i-electronics, ukushicilelwa kwe-3D kunye namanye amashishini.
Inkcazo yolu luhlu lwe-FB lwesigaba sesithathu se-Explosion-proof Vacuum cleaner
Iiparameter zolu luhlu lubalaseleyo lwe-FB isigaba sesithathu sokuqhushumba-ubungqina bokuthengisa isicoci
1. Ukuqhuma kweemoto, ukukhusela umbane wombane
Inkqubo yamandla yamkela ukuqhubekeka kwangaphambili-kobungqina bokuphosa i-turbine fan (impompo yomoya), i-voltage-frequency, ukuthembeka okuphezulu, ingxolo ephantsi, ubomi obude kunye nokusebenza okuqhubekayo kweeyure ezingama-24. Amandla afumaneka kwi-0.25kw ukuya kwi-4.0kw, umbane yi-380V / 50Hz.
Inqanaba lokudubula kwemoto: Ex d-BT4 Gb
2. Isicoci se-anti-static sokuthintela iingozi ezingatshintshiyo
Ibhegi yeenkwenkwezi eneenketho kunye neefilitha zecartridge zeenkqubo zokucoca.
Isihluzi sebhegi senkwenkwezi sisebenzisa imixube ye-antistatic edibeneyo yokuphucula ukuqhuba ngokongeza imicu yokubini.
Icebo lokucoca ulwelo lwecartridge liphathwa nge-aluminized surface coating, ene-antistatic performance kunye nokumelana nomphezulu ≤105Ω.
3. Ibhokisi yombane enobungqina bokuqhushumba ukunqanda iingozi zombane
Inkqubo yokulawula isebenzisa ibhokisi yombane enobungqina bokuqhushumba, isinxibelelanisi se-AC sangaphakathi kunye nokusetyenziswa okugqithisileyo kobushushu kumatshini wombane weSchneider.
Ibhokisi yombane enobungqina bokuqhushumba, uphawu lokuqhushumba: Ex d II BT4
4. Ukubeka iliso koxinzelelo olubi, isikhumbuzi sokucoca
Igeji yoxinzelelo olubi licandelo loqwalaselo oluqhelekileyo kumatshini uphela. Yenzelwe ngokukodwa izixhobo zokucoca umshini nguPuhua. Umbala oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka nobomvu ngokwahlukeneyo uhambelana noxinzelelo lwangaphakathi olubi kumatshini kwicandelo ngalinye lamandla. Isikhombisi esikhomba kwindawo ebomvu ukubonisa isihluzi kufuneka sicocwe okanye sibuyiselwe.
5. I-casters zeshishini, kulula ukuhambisa i-caster ye-Industrial kulula ukuyifaka.
Amavili enziwe nge-polyurethane ekumgangatho ophezulu (PU), izibiyeli zenziwe ngeepleyiti ezikhawulezayo ezingama-2.5mm ukwandisa iimbambo, kwaye ii-casters ezi-2-intshi zinokuthwala i-50kg ngokwahlukeneyo. Umphezulu wamavili uyilelwe ngeenkozo ukuphucula ukusebenza kwe-anti-slip.
6.Sahlula imigqomo ephezulu neyasezantsi, kulula ukuyicoca Ulwakhiwo olusezantsi nolusezantsi lwemigqomo yinkqubo yoqwalaselo esemgangathweni yomatshini, ethi izise eyona nto ilula kumsebenzisi. Kukulungele ukucoca uthuli. Xa kufuneka ucoce uthuli, kufuneka uphakamise ibar yoxinzelelo, ingqokelela yokuqokelela uthuli ngokwemvelo iwela emhlabeni, kwaye uhambise umgqomo., Ulahla uthuli, kwaye ucinezele ibar yoxinzelelo emva kokugqiba.
7. Inkanyamba ngaphakathi ukunciphisa umthwalo kwisihluzi Ulwakhiwo lwenkanyamba lwangaphakathi sisimo esimiselweyo somatshini. Ifakelwe kunxibelelwano nezibuko lokutsala. Amasuntswana amakhulu anokuzinziswa ngokuthe ngqo phantsi kothuli oluqokelela ibhakethi ngokwahlulahlula inkanyamba. Akudingeki ukuba ibanjwe kwaye ibanjwe ngesihlungi, esinokwandisa ubomi becebo lokucoca.
I-anti-static interface kunye ne-hose I-hose kunye ne-connector zenziwe ngezinto ezichasayo, ukuqhuba kombane kuhambelana ne-DIN53482, kunye nokuchasana komhlaba ngu- <106Ω.
9. Isihluzi samkela ngokujikeleza ngesandla ukucoca uthuli, olulungeleyo nolusebenzayo. Ukucoca uthuli olujikelezayo kusetyenziswa imo yemanyuwali. Kufuneka ujikeleze kuphela isiphatho esijikelezayo ngokwewotshi / ujikeleze ngasekhohlo malunga nemizuzu eli-1 ukucoca amasuntswana amakhulu othuli anamathela kumphezulu wecebo lokucoca ulwelo.
Umzekelo FB-22 FB-40
Amandla （Kw 2.2 4
Qaphela （V / Hz） 380/50 ~ 60
Ukungena komoya （m3 / h） 265 318
Isithuba （mbar） 240 290
Umthamo wetanki （L volume 60
Ingxolo dB （A） 72 ± 2 74 ± 2
Inhalation ubukhulu （mm） 50
Icebo lokucoca ulwelo （m2） 3.5
Isihluzi somthamo Icebo lokucoca ulwelo elinganyangekiyo st 0.3μm, 99.5%）
Ukucoca isihluzi ujikeleze ngesandla
Lobukhulu （mm） 1220 * 565 * 1270
Ubunzima （kg） 105 135
Egqithileyo A9 uthotho lwezinto zokucoca uthuli
Okulandelayo: Uluhlu lwebhetri ye-P3 engenazintambo engenazintambo
T5 series Isigaba esinye somphanda othulini ongaphezulu ...
P3 series ibhetri amandla cordless v mveliso ...